Accounting / Finance in Hotels / Lodging in Yangon
-	B.Comဘွဲ့ရ (သို့) ACCA part (II) (သို့) CPA အောင်မြင်ပြီးသူ ဖြစ်ရမည်။ -	အသက် (၃၀) မှ (၃၅) နှစ်အတွင်း ဖြစ်ရမည်။ -	သက်ဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ (၅) နှစ်အထက် ရှိရမည်။ -	Accounting Software နှင့် Advanced Excel အသုံးပြုနိုင်သူ ဖြစ်ရမည်။ -	မိမိ Account Team အား ဦးဆောင်နိုင်သူ ၊ စီမံအုပ်ချုပ်နိုင်သူ ဖြစ်ရမည်။ -	Team Work Building ရှိပြီး ဆက်ဆံရေးပြေပြစ် ကောင်းမွန်သူ ဖြစ်ရမည်။ -	အင်္ဂလ်ိပ်ဘာသာ အရေးအဖတ်အပြော အသင့်အတင့် နားလည်တတ်ကျွမ်းရမည်။ -	ရေရှည်လက်တွဲ လုပ်ကိုင်နိုင်သူဖြစ်ရမည်။ -	(ဟိုတယ်လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ ရှိသူ ဦးစားပေးပါမည်။)
Miniutes away from yangon's most popular attractions and business district,Hotel shwe gone daing isasmart combination of location,convenience and value for money accomodation for the tourist and business traveller or for extended stay.
Designed with total convenience and functionally for our guests in mind,most rooms and all serviced apartment unites incorporate internet connection ( 1st hotel in yangon). For you dinning and entertainment pleasurearestaurant with chinese & western cuisines, SPA & KTV private rooms are available-all under roof.
Whether for business or leisure or long term stay in yangon, hotel shwe gone daing isasmart choice always.